Savaranonando 2014 | SEFAFI
Samy nanantena na nanandrana nanantena daholo ny rehetra tamin’ny 25 janoary 2014. Nandiso fanantenana ihany saingy nakasitrahan’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fomba nifidianana ny filohan’ny repoblika sy ny solombavambahoaka namarana ilay Tetezamita nitatra ohatrany sima misioka. Nisy tsirim-panantenana mba niverina, nohamafisin’ny fanomezan-toky avy amin’ny Filoha voafidy, tamin’ny andro nanaovany ny fianianany.
Indrisy fa tsy nifanaraka velively tamin’ny voniny ny voany nampanantenainy. Ny andraikitra voalohan’ny Filoha dia ny nanendry Praiminisitra. Adin-drenikisoa nandritra ny telo volana manodidina ny andininy faha 54-n’ny Lalàmpanorenana no naterak’izany (« Ny filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra izay atolotry ny antoko na ny vondron’antoko maro an’isa ao amin’ny Antenimieram-pirenena »). Ny Filoha moa tsy nanana olom-boafidy na iray aza avy ao amin’ilay antoko vao noforoniny, hany ka na dia efa nozaraina aza ny fahefana dia mbola nahasarika antoko sy mpanohitra ampy hanatrarana ny maro an’isa nilainy izy, tetsy an-daniny anefa ny mpanohitra dia nilaza fa ry zareo no maro an’isa ! Nisy Praiminisitra iray voatendry, nisy governemanta tafajoro, dia izay... tsy nisy na inona na inona intsony avy eo.
Ny Antenimieram-pirenena moa variana tamin’ny lalao mamoafadin’ny adivarotra sy ny famadihana palitao, ny governemanta kosa lasa nikaroka PND (Fandaharan’asam-Pirenena ho an’ny fampandrosoana) tsy ho hita velively, nefa dia tena nilain’ny mpamatsy vola maika io mba hanamarinany ireo fanampiana efa nomaniny harotsaka ho an’ny firenena. Hita miharihary fa ny ekipa teo amin’ny fitondrana dia tsy nanana na tetik’asa na laharam-pahamehana, hany heriny dia namoaka PNDi (PND savily) izay mody nataon’ny rehetra ho nahafapo azy.
Abaribarin’ny lalàna avoakany fa tsy ampy ny fahaiza-mitsinjon’ny mpanantanteraka izay misavoritaka izatsizy. Toy izany izao ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny andrim-panjakana vaovao izay naroso nefa tsy naka na ny hevitry ny mponina ary tsy nasiana filazana mandresy lahatra mikasika izay an-dohasy an-tongotr’ilay fehezan-dalàna vaovao. Toy izany koa, ny volavolan-dalànan’ny fitantanam-bola ho an’ny taona 2015, antontan-taratasy mahatratra takila an-jatony, nafenina fatratra hatramin’ny minitra farany, dia nolanian’ny Antenimieram-pirenena tsy nasiam-panitsiana na kely aza, zavatra hafa loatra mantsy no nahamay azy. Ny fiarahamonim-pirenena moa dia misaratsaraka sy misavoritaka tahaka ny Fanjakana ihany, dia iza àry no mbola mety hahavita hiaro ny vahoaka ?
Mandritra izany, any atsimo, ny dahalo dia mbola manohy mangalatra ny ombin’ny tantsaha, tsy nahafongatra azy ny hetsika « Tandroka » natao tamin’ny taona lasa. Ny hetsika vaovao, « totohondry na coup de poing » dia nahafatesana olona 573, isa ofisialy, ka ny 445 dia dahalo, ny 115 olon-tsotra, ary ny 13 mpitandro ny filaminana. Io ve no antony nahatonga ilay fiovana fo tonga tampoka sy nampiahiahy ka dahalo 4.000 no nirotsaham-pahasoavana hibebaka, ary tsy misy mahalala izay hanaovana azy ireo amin’izao fotoana izao ?
Soa ihany fa ny 13 oktobra dia niverina tampoka i Marc Ravalomanana, tahaka ny niditra an-tsokosoko teto an-tanindrazany mba hiala amin’ny sesitany lava be nihatra taminy tatsy Afrika-Atsimo, io no mba namelombelona kely ny fiainana politika. Nosongonan’ny FFKM ny FFM ka nohararaotiny notanterahina haingana ilay nofinofiny hampihaona ny filoha rehetra tany aloha, mody nolazaina hoe fampihavanam-pirenena. Moa ve hahita mangirana kokoa ny olom-pirenena amin’ny taona 2015 ?
Ny filazana navoakan’ny SeFaFi nandritra ny taona 2014 izay mitambatra ato amin’ity boky kely ity dia maneho ny fahadisoam-panantenan’ny ankamaroan’ny mponina. Tsy nisy farany ny delestazy na dia efa injato kely aza ny mpitondra no nampanantena ny fiafarany, io no sary mivaingana indrindra maneho izany. Very indray ny taona iray raha tsorina, nefa tsy misy azo ampiandrasana intsony na aiza na aiza : rivotra politika manempotra, toekarena saozanina, fiarahamonina efa mihalo tanteraka. Marina e, tena misorovoro ny fiantomboky ny Repoblika faha-IV.
Indreto ny mpikambana ao amin’ny taona 2014 ANDRIAMANDRANTO Ralison
Filoham-boninahitra : RAMAHOLIMIHASO Madeleine
Antananarivo, androany faha-31 Desambra 2014